Shiinaha Dhalada Kaabsal PET Brown warshad iyo saarayaasha | Baakadaha Qianduo
Dhalooyinka balaastikada ah ee PET waxay fadhiyaan meel muhiim ah oo suuq ah oo ku dhow suuq kasta oo baakadaha wax lagu rito. Tani dabiici ahaan lagama sooci karo faa'iidooyinka dhalooyinka caaga ah ee PET. Ugu horreyntii, xasilloonida walxaha caagga ah ee xayawaanku way fiican tahay, iska caabinta heerkulka, heerkul gaar ah si loo ilaaliyo xasilloonida maaddada, gaar ahaan ku habboon baakadaha cuntada. Marka labaad, dhalooyinka caaga ah ee xayawaanku waa kuwo hufan oo leh muuqaal la mid ah dhalooyinka quraaradaha ah, laakiin way ka fudud yihiin oo aad bay u jilicsan yihiin. Mar saddexaad, dhalooyinka caagga ah ee xayawaanku waa raqiis, taas oo ku habboon badbaadinta kharashka baakadaha. Ugu dambeyntiina, dhalooyinka caagga ah ee xayawaanku waxay leeyihiin qaabab kala duwan, kuwaas oo qaabeyn kara qaabab kala duwan.
Faa'iidooyinka Dhalada PET
bunni Dhalooyinka PET waa kuwo fudud oo adag, xooggooda iyo dabacsanaantoodu aad ayey uga sarreeyaan kuwa ka samaysan waxyaabaha kale ee caagga ah. Dhalada Polyester-ku waa khafiif waana adag tahay, xooggeeda iyo dabacsanaanteeduna aad ayey uga sarreeyaan kuwa ka samaysan waxyaabaha kale ee caagga ah. Waxay u adkeysan kartaa saameynta weyn waxyeelo la'aan. Waxay ku habboon tahay sameynta dhalooyinka baakadaha daroogada leh derbi dhuuban, miisaan fudud iyo xoog sare. Marka laga hadlayo isla mugga daroogada, culeyska dhalada PET waa kaliya 1/10 ee dhalada dhalada ah; miisaanka dhalada PET oo leh isla dhexroorka banaanka waa 1.5 jeer kan dhalada dhalada ah. Dhalooyinka daahsoon ama madoowga ah waxaa laga samayn karaa alaabta ceeriin ee PET.
Astaamaha Dhalada wanaagsan ee PET
Caadi ahaan nolol maalmeedkeenna, qaababka ugu caansan ee daasadaha balaastigga ah waa laba jibbaaran, leydi, goobaabin, ellipse, iwm marka laga eego aragtida adeegsiga, faa'iidooyinkoodu waa kuwo gaar ah. Jirka dhalada waa in sifiican loo sameeyaa, oo leh hufnaan sare, oo aan lahayn goobooyin, dhibco madow, wasakhda saliida, maaddooyinka adag, xoqitaan, faraantiyo adag, atomis iyo caddeyn. Midabka dhalada midabada leh waa inuu ahaadaa mid isku mid ah oo aan lahayn kala duwanaansho midab muuqda. Wejiga ugu dambeeya ee afka dhalada waa inuu ahaadaa mid fidsan, oo aan waxyeello iyo qaan gaar ahayn lahayn, oo leh dunta oo dhammaystiran, oo dhammaystiran crystallization, oo aan lahayn daadasho, sawir, cillad iyo wasakhda saliidda ee gudaha iyo dibedda. Dhalada dhalada waa inay ahaataa mid sifiican u sameysan, niyad jab la'aan, kacsan iyo bartanka Muuqaalka dhalada caaga ah ee caafimaadka xoolaha la buuxiyo ayaa ka madax banaan dhuuqida iyo qallooca, dhalada fidsan, qalloocinta darbiga dhinaceeda, hoose qulqulka iyo niyadjabka. Badeecadu waxay leedahay dusha nadiif, ma laha ur gaar ah, qalalan, ma leh boodh iyo saliid wasakh ah, mana laha wasakh gudaha.
Hore: Kaabsal PET Blue
Xiga: Dhalo Kaabsal PET Green